နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ: ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ (၃)
ယခုအပိုင်းတွင် ကောဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်း တင်ဆက်သွားပါမည်။
ဗေဒင်အခေါ်အဝေါ် ရာသီအံသာနည်းဖြင့် နက္ခတ်တို့တည်ရာကို သိလိုပါက ဤပို့စ် တွင်ဖတ်ပါ။
0' နေရာသည် သင်္ကြန်ကျချိန် နေမင်းစီးနင်းရာ လောင်ဂျီမျဉ်းဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မိန်ရာသီအဆုံး မိဿအစဖြစ်သည်။ ရေ၀တီနက္ခတ်အဆုံး အာသာဝဏီအစလည်းဖြစ်သည်။
120' နေရာသည် ကြဋ်(ကရကဋ်)နှင့် သိဟ်ရာသီကြားတွင်ကျကာ နက္ခတ်အားဖြင့် အသိလိသနက္ခတ်အဆုံး မာဃနက္ခတ်အစဖြစ်သည်။
240' နေရာသည် ဗြိစ္ဆာရာသီအဆုံး ဓနုရာသီအစဖြစ်ကာ၊ ဇေဌနက္ခတ်အဆုံး မူလနက္ခတ်အစလည်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါ 0' 120' နှင့် 240' တို့သည် ရာသီအရဖြစ်စေ၊ နက္ခတ်အရဖြစ်စေ၊ အကျိုးသက်ရောက် ဖေါ်ဆောင်နိုင်မှုများမရှိ အားနည်းလှသောကြောင့် မူလဇာတာတွင် ထိုအစပ်ဒေသများသို့ လဂ် စန်း ၁နွေတို့ ကျရောက်ပါက ကြီးစွာသောအပြစ်များကို ပေးသည်ဟုလည်းကောင်း၊ အသက်တိုသောယုဂ်ကို ပေးစွမ်းသည်ဟုလည်းကောင်း မှတ်သားရဖူးပါသည်။ ထိုသို့အားနည်းပုံကို MOTAA နည်းစနစ်များတွင် ဘာဝအလယ် ရာသီအလယ်မှာ သွေခွာမှုအားကို စစ်ထုတ်ခဲ့သဖြင့် တစ်ဝက်ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟု ယူဆပါသည်။ ထိုအစပ်များသို့ ဂြိုဟ်များ အံသာနီးကပ်စွာကျရောက်ပါက အခြားရာသီအစပ်၊ နက္ခတ်အစပ်များထက် ပိုမိုအားလျော့မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
0' မှ 120' ကြားတွင် နက္ခတ်များကို စိုးမိုးသောဂြိုဟ်များမှာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ဖြစ်သည်။
120' မှ 240' ကြားတွင် နက္ခတ်များကို စိုးမိုးသောဂြိုဟ်များမှာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ဖြစ်သည်။
240' မှ 360' ကြားတွင် နက္ခတ်များကို စိုးမိုးသောဂြိုဟ်များမှာ ၉ ၆ ၁ ၂ ၃ ၈ ၅ ၀ ၄ ဖြစ်သည်။
နက္ခတ်အချင်းချင်း ၁၂၀ ဒီဂရီခြားတိုင်း (တနည်းအားဖြင့် သုံးနားညီ တြိဂံကျတိုင်း) ဆက်နွယ်မှုရှိသော အနေအထားကို တွေ့ရပါသည်။
အထက်ပါပုံအရ အာသာဝဏီ၊ မာဃနှင့် မူလနက္ခတ်သုံးလုံးမှာ ၉ ကိတ် စိုးမိုးသော နက္ခတ်များဖြစ်သည်။ အကျိုးပေးမှာကွဲပြားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
-အာသာဝဏီနက္ခတ်သည် ၉ ကိတ်စိုးမိုးသော်လည်း ၃ င်္ဂါပိုင် မိဿရာသီတွင်တည်သည်။
-မာဃနက္ခတ်သည် ၉ ကိတ်စိုးမိုးသော်လည်း ၁ နွေပိုင် သိဟ်ရာသီတွင်တည်သည်။
-မူလနက္ခတ်သည် ၉ ကိတ်စိုးမိုးသော်လည်း ၅ တေးပိုင် ဓနုရာသီတွင်တည်သည်။ ထိုသို့ကွဲပြားကြပါသည်။ နက္ခတ်အဟောများမှာ နက္ခတ်စိုးမိုးဂြိုဟ် ရာသီအိမ်ရှင်ဂြိုဟ် တို့အပေါ်တွင်မှီခိုကာ လဂ် စန်း ၁နွေသဘာဝအရ ကွဲပြားကြသေးသဖြင့် နက္ခတ်အဟောများသည် နက်နဲ့ရှုပ်ထွေး ၀ိဝါဒကွဲပြားလျှက်ရှိပါသည်။ နောင်တွင် နက္ခတ်အဟောများကို ဥာဏ်မီသမျှ ပြုစုတင်ပြပါဦးမည်။
ယခင်ပို့စ်ပါဇာတာရှင်အတွက် 2003 ခုနှစ်အတွင်း ကောဇာဂြိုဟ်နေကို နမူနာပြစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သဖြင့် လဂ်၊ စန်း၊ ၁နွေ စီးရာနက္ခတ်များနှင့် တြိဂံကျသော နက္ခတ်များကို ရှာဖွေရန်လိုအပ်လာပါသည်။
မူလဇာတာမှ စန်းလဂ်၁နွေ စီးနက္ခတ်များ
အထက်ပါပုံအရ ၁ နွေနှင့် ၂ လာ(စန်း) တို့သည် ပြုဗ္ဗာသဌ်နက္ခတ်တွင်းစီးနင်းသဖြင့် ၄င်းမှ တြိဂံကျသော ဘရဏီ ပြုပ္ဗဖလနီ နက္ခတ်တို့ကို ဖေါ်ထုတ်ရရှိသည်။ လဂ် သည် မူလနက္ခတ်နှင့် ပြုဗ္ဗာသဌ်နက္ခတ်ကြားတွင်ကျရောက်ကာ မူလဖက်သို့ အနည်းငယ်တိမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် မူလနက္ခတ်မှ တြိဂံကျသော(ဗေဒင်အခေါ် တြိဂေါဏကျသော) အာသာဝဏီ နှင့် ပြုဗ္ဗဖလဇနီ နက္ခတ်တို့ကို ရရှိပါသည်။
အထက်ပါ ပုံ၏ဆိုလိုရင်းမှာ လဂ် အံသာ ဒီဂရီအရ အတန့်အလည်မှတ်များတည်နေပုံဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၁၁ တန့်သည် တူရာသီတစ်ဝိုက်တွင်တည်ကာ၊ ၁၁ တန့်အလယ်မှတ်သည် တူရာသီ ၁၅ အင်သာ ၅၈ လိတ္တာ (သို့) ၁၅ ဒီဂရီ ၅၈ ဒီဂရီ (သို့) လဂ်တည်ရာ၏ အံသာ လိတ္တာ ဖြစ်သည်။ ထိုအမှတ်များကို သိပါမှ ကောဇာဂြိုဟ်များ အတန့်အလည်စိုးမိုးမှုကို သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နေထွက်ရာအရပ်ကို အရှေ့အရပ် (သို့) ဥတဉ်းအရပ်၊ ဥဒယအရပ်ဟုခေါ်သည်။ ဇာတာရှင်မွေးဖွားစဉ်တည် အရှေ့အရပ်ရှိ လောင်ဂျီကျုမျဉ်းဖြစ်သည်။ လဂ်ဘာဝ (သို့) တနုဘာဝ (သို့) ၁ တန့်ဘာဝ၏ အလည်မှတ် ဖြစ်သည်။ ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဇာတာရှင်၏ ခန္ဓာကိုယ်၊ ဥပဓိ၊ အရောင်အဆင်း၊ စရိုက်၊ ထုံးတမ်း၊ ၀ါသနာတို့ကို ဖေါ်ပြသည်။
နေထွက်ရာမှ လက်ယာရစ် ၉၀ံ အရပ်သည် ဇာတာရှင်မွေးဖွားစဉ်တွင် ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်တည်သော မဓျ ထိပ်စွန်း လောင်ဂျီကျုမျဉ်းဖြစ်သည်။ ၁၀ တန့်ဘာဝ (သို့) ကမ္မဘာဝ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ အရည်အချင်းကို ဖေါ်ပြသည်။
နေထွက်ရာမှ ၁၈၀ံ အရပ်သည် ဇာတာရှင်မွေးဖွားစဉ်တွေ အနောက်အရပ်ရှိ လောင်ဂျီကျုမျဉ်းကို ဖေါ်ပြသော အမှတ်ဖြစ်သည်။ ၇ တန့်ဘာဝ (သို့) ပထနီဘာဝ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဆက်ဆံရေး၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်၊ အိမ်ထောင်ဖက် ကိုယ်လုံးကိုယ်ဖန်၊ အရည်အသွေးတို့ကို ဖေါ်ပြသည်။
နေထွက်ရာမှ လက်ယာရစ် ၂၇၀ံ အရပ်သည် ဇာတာရှင်မွေးဖွားစဉ်တွင် အောက်တည့်တည့်တည်သော ပါတ အောက်ထိပ်စွန်း လောင်ဂျီကျုမျဉ်းဖြစ်သည်။ ၄ တန့်ဘာဝ (သို့) ဗန္ဓုဘာဝ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်၏ အတွင်းစိတ်၊ အေးချမ်းမှု၊ စည်းစိမ်ခံစားမှုတို့ကို ညွှန်းဆို ဖေါ်ပြသည်။
အခြားအတန့်များ၏ ပရိယာယ်များကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီမှ စတင်တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်လိုက်ပါက
ရရှိလာမည့် ဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန်မှာ 2003 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအတွက် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါဇယားသည် ဇန်န၀ါရီအတွင်း ဂြိုဟ်နေကို ပြဆိုသည်။
၁နွေသည် 1.1.2003 တွင် 8-16'15" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 9-16'48" တွင်တည်သည်။
၂လည်သည် တစ်လအတွင်း ရာသီစက်ဝန်းတပြည့်ပတ်သောကြောင့် တစ်လအတွင်းစစ်ဆေးရန်မဟုတ်သဖြင့် ထည့်သွင်းမတွက်တော့ပေ။
၃င်္ဂါသည် 1.1.2003 တွင် 6-25'41" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 7-15'1" တွင်တည်သည်။
၄ဟူးသည် 1.1.2003 တွင် 9-4'18" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 8-21'54" တွင်တည်သည်။
3.1.2003 မှ 23.1.2003 ကြား ၄ဟူး နောက်ပြန်သွားသည်။
၅တေးသည် 1.1.2003 တွင် 3-23'0" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 3-19'32" တွင်တည်သည်။
ဇန်န၀ါရီတစ်လလုံး ကြာသာပတေး နောက်ပြန်သွားသည်။
၆ကြာသည် 1.1.2003 တွင် 6-29'47" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 8-1'0" တွင်တည်သည်။
၀နေသည် 1.1.2003 တွင် 2-0'34" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 1-28'43" တွင်တည်သည်။
ဇန်န၀ါရီတစ်လလုံး စနေ နောက်ပြန်သွားသည်။
၈ဟုသည် 1.1.2003 တွင် 1-13'9" တည်ကာ 31.1.2003 တွင် 1-11'33" တွင်တည်သည်။
၉ကိတ်သည် ၈ဟုနှင့် အမြဲမျက်နှာချင်းဆိုင်သည်။
1.1.2003 မနက် 0:00 နာရီရှိကောင်းကင်ဂြိုဟ်များမှ ဇာတာရှင်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုကို မူလလဂ်အပေါ် ကောဇာဂြိုဟ်များလွှမ်းမိုးမှုအရ MOTAA စနစ်ကိုသုံး၍ တင်ပြရသော်၊
မူလဇာတာနှင့် ကောဇာဂြိုဟ်တို့ ပျမ်းမျှယူထားသော ဂြိုဟ်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါဂြိုလ်အားအရ မူလလဂ်တည်ရာ ဓနုရာသီတွင် တနင်္ဂနွေတည်ကာ၊ ရာသီ၏အလယ်၊ ၁ တန့်အလယ်မှတ်များသို့ ၁ နွေနီးကပ်စွာပူးယှဉ်သောကြောင့် ၁ နွေအားကောင်းသော်လည်း အခြားဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှာ အနှုတ်သဘောသို့ ဆောင်နေသည်။ 100% မပြည့်သော စိုးမိုးမှုများသာ ဖြစ်ကြသည်။
ဘာဝအတန့်များအရ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဂုဏ်သိက္ခာမှအပ ကျန်ကဏ္ဍအားလုံး အနှုတ်ဆောင်ကာ ဂြိုဟ်ဆိုးလွှမ်းမိုးမှုများသည်။
အထက်ပါအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကောဇာလွှမ်းမိုးမှုများကို မူလဇာတာနှင့် ချိန်ညှိခြင်းကို နာရီတိုင်း နေ့ရက်တိုင်းအတွက် တွက်ချက်ဟောပြောနိုင်သည်ကို တွေ့ရသော်လည်း၊ အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်များကို သိနိုင်ရန်မူ ပါးနပ်စွာ ရွေးကောက်နိုင်မှဖြစ်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သိလိုသည့်နှစ်အတွင်း ရွေ့လျှားနေနိုင်သည့် ဂြိုဟ်တို့၏ သွားလာမှုဧရိယာကို သိရန်လိုသည်။ အသွားနှေးသော ဂြိုဟ်များကို ပထမဦးစွာ ရွေးချယ်ပြရလျှင်
1.1.2003 တွင် ရာဟုဂြိုဟ်သည် ၆ တန့်အလယ်နှင့် နီးကပ်စွာ ယှဉ်ပူးလျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် အပေါ်မှပြဆိုခဲ့သော 1.1.2003 ၏ MOTAA စနစ်အရပြဆိုထားသော ဂြိုဟ်အား၊ ဘာဝအားပြ ဂရပ်ဖ်တို့တွင် ရာဟုဂြိုဟ်အား အနှုတ်ပြကာ၊ ရာဟုရပ်သော ၆ တန့်၊ မြင်သော ၁၂ တန့် ၁၀ တန့် ၂ တန့်များလည်း အင်းအားများအနှုတ်ပြလျှက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရေးပါသော ကာလများကို ကောဇာစီးနင်းသောဂြိုဟ်များ အတန့်အလယ်များကို စိုးမိုးမှုအရ ဖေါ်ထုတ်ဝေဖန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အရေးပါသော ကာလများကို စစ်ထုတ်ခြင်း
ရာဟုသည် 1.1.2003 တွင် ၆တန့်အလယ်နှင့် နီးကပ်စွာယှဉ်တွဲနေသော်လည်း နှစ်ဆုံးတိုင်အောင် ၆တန့်အလယ်မှ သွေဖယ်ကာ ၅ တန့်ဆီသို့သွားလျှက်ရှိသည်။ 2003 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် အတန့်ဗဟိုများနှင့်ဝေးကွာကာ ရာဟု၏ ခြေဖျက်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလျှက်ရှိသည်။ ရာဟုနှင့်ကိတ်တို့သည် အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်မှသာ အကျိုးအပြစ်ပေးနိုင်စွမ်းကြီးသဖြင့် ၄င်းတို့မြင်ယှဉ်နိုင်သော ဂြိုဟ်တို့ကို ရှာဖွေရန်လိုသည်။ 1.1.2003 တွင် ရာဟုရပ် အံသာမှာ ၅ အင်သာဝေးကွာသော အတိုင်းအတာအတွင်းသာ အကျိုးအပစ်များမည်ဖြစ်သည်။ 1.1.2003 တွင် ၈ဟုသည် ပြိဿ 13' 9" တွင်တည်သောကြောင့် ၆တန့်အလယ် ၁၂ အင်သာ ၅၈ မှ ၅ အင်သာ (MOTAA စနစ်အားဖြင့် 60%) သွားရောက်ပြီးသော ပြိဿရာသီ 7' 58" အကွာအဝေးရှိ 9.4.2003 တိုင် ခြေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိမည်။ ထိုမှကျော်က အတန့်အလည်များနှင့် ဝေးကွာသဖြင့် အားမရှိတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ရာဟုနှင့်ကိတ်တို့၏ စိုးမိုးမှုအားကြီးမှုသည် 1.1.2003 မှ 9.4.2003 အတွင်းသာရှိသည်။ ၄င်းသည် ၆ တန့်နှင့်နီးစပ်သောကာလဖြစ်၍ အဆိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။
ကြာသာပတေးသည် 1.1.2003 တွင် ကရကဋ်ရာသီ 23'0" တွင်တည်ကာ 4.4.2003 တွင် ကရကဋ် 14'10" တိုင် ပြောင်းပြန်သွားလျှက်ရှိသည်။ ၄င်းမှတစ်ဖန် သိဟ်ရာသီ 24'59" သို့ နှစ်ဆုံး 31.12.2003 တိုင် ရွေ့လျှားလျှက်ရှိသည်။ ထူးခြားသောအားသက်ရောက်မှု နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။
(၁) ၈တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသောကာလ
၈တန့်အလယ်သည် ကရကဋ် 12'58" ဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းမှ ၅ အင်သာအကွာ 17'58" တိုင် အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကြာသာပတေးလာကပ်သော အချိန်နှင့် ပြန်ထွက်ခွာသော အချိန်များကြား လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းကာလမှာ 12.2.2003 မှ 25.5.2003 ကြားကာလဖြစ်သည်။ 17'58" ကိုအသွားအပြန်ဖြတ်နင်းကာ ၈ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်။ အဆိုးသဘောဖြင့် ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။
(၂) ၉တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသောကာလ
၉တန့်အလယ်သည် သိဟ် 12'58" ဖြစ်သောကြာင့် ၄င်းမှ ၅ အင်သာ ရှေ့နောက်ခွာသော 7'58" မှ 17'58" အတွင်း ချင်းနင်းဝင်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ 5.9.2003 မှ 25.10.2003 အတွင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းသဘောဖြင့် ချဉ်းကပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
စနေသည် 1.1.2003 တွင် မေထုန် 0'34" တည်ကာ 22.2.2003 နေ့ ပြိဿ 28'15" တိုင် နောက်ပြန်သွားသည်။ ၄င်းနောက် 26.10.2003 တိုင် မေထုန် 19'21" သို့သွားကာ နှစ်ဆုံး 31.2.2003 တွင် မေထုန် 15'56" ၌ တည်လျှက်ရှိသည်။
ထူးခြားသော သက်ရောက်မှုများအနေဖြင့် ၇ တန့်အလယ်ဖြစ်သော မေထုန်ရာသီ 12'58" မှာ ၅ အင်သာ ရှေ့နောက်ခွာထားသော မေထုန် 7'58" မှ မေထုန် 17'58" ကြား စနေစီးနင်းမှုဖြစ်သည်။ ကာလများအနေဖြင့် 18.7.2003 မှ နှစ်ဆုံးတိုင်ဖြစ်သည်။ အဆိုးသဘောဖြင့် သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။
အင်္ဂါသည် 1.1.2003 တွင် တူ 25'41" တွင်တည်ကာ 30.7.2010 တိုင် ကုမ်ရာသီ 16'14" သို့သွား၏။ ထို့နောက် ကုမ်ရာသီ 6'13" သို့နောက်ပြန်သွားကာ နှစ်ဆုံးတွင် မိန်ရာသီ 14'40" တိုင်ခရီးဆက်၏။ ဒီဂရီဖေါ်ပြမှုများကို ချန်လှပ်ခဲ့တော့မည်ဖြစ်သည်။
(၁) ၁၂ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
20.1.2003 မှ 4.2.2003
(၂) ၁ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
8.3.2003 မှ 24.3.2003
(၃) ၂ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
25.4.2003 မှ 12.5.2003
(၄) ၃ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
21.6.2003 မှ 11.9.2003
13.10.2003 မှ 12.11.2003
(၅) ၄ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
19.12.2003 မှ 31.12.2003
အသွားနှေးသော ဂြိုဟ်အချင်းချင်း မြင်ယှဉ်မှုကိုပင် ဖေါ်ပြမည်ဖြစ်သည်။
၈ဟုမှ မြင်ယှဉ်ပုံများ 0' 120' 180' 240'
အထက်ပါပုံအရ ဤနှစ်တစ်နှစ်လုံး ၈ဟုသည် စနေကို မမြင်နိုင်ပေ။
နှစ်ဆုံးတွင် မြင်ယှဉ်နိုင်သော အနေအထားရှိသော်လည်း ၈ဟုသည် အတန့်အလယ်မှတ်များ၊ ရာသီအလယ်မှတ်များနှင့် ဝေးကွာသွားသဖြင့် အားကိုးလောက်သော အင်အားကို မရရှိပေ။
အင်္ဂါသို့မူ 180' အမြင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ 240' အမြင်ဖြင့်လည်းကောင်း မြင်ယှဉ်နိုင်သည်။
မြင်ယှဉ်သောရက်တို့ကို အတိအကျဖေါ်ပြရလျှင် 26.1.2003 တွင် အင်္ဂါသည် ဗြိစ္ဆာ 11'48" တွင်တည်ကာ ၈ဟုသည် ပြိဿ 11'49" တွင်တည်လေသည်။ ၁၈၀ ဒီဂရီမြင်ကြလေသည်။
24.4.2003 တွင် အင်္ဂါသည် မကာရရာသီ 7'19" တွင်တည်ကာ ၈ဟုသည် ပြိဿရာသီ 7'9" တွင်တည်၍ ၈ဟုက အင်္ဂါကို ၂၄၀ ဒီဂရီဖြင့်မြင်လျှက်ရှိသည်။
ကြာသာပတေး၏ အမြင်များ 0' 120' 180' 240'
နှစ်ဆုံးတွင် ၈ဟုသို့ 240' အမြင်ဖြင့် မြင်နိုင်သော်လည်း ထိုအချိန်သည် ၈ဟုသည် အားနည်းလျှက်ရှိသည်။
စနေသို့မူ ဤနှစ်အတွက် မမြင်နိုင်ပေ။
အင်္ဂါသို့မူ 120' 180' ပါမြင်ယှဉ်နိုင်သော အနေအထားဖြစ်သည်။
6.2.2003 တွင် ကြာသာပတေးသည် ကရကဋ် 18'44" တည်ကာ အင်္ဂါသည် ဗြိစ္ဆာ 18'53" တွင် တည်ရှိသည်။။ 120' အမြင်ရှိသည်။
8.5.2003 တွင် ကြာသာပတေးသည် ကရကဋ် 15'54" တည်ကာ အင်္ဂါသည် မကာရ 15'33" တွင်တည်သည်။ 180' အမြင်ရှိသည်။
စနေ၏ အမြင်များ 60' 180' 270'
31.10.2003 တွင် စနေသည် မေထုန် 19'19" တွင်တည်ကာ ကြာသာပတေးသည် သိဟ်ရာသီ 19'1" တွင်ကျရောက်သဖြင့် 60' ဖြင့် အမြင်ရှိသည်။ ဘာဝအလယ်များဖြင့် ဝေးလွန်းသဖြင့် ပယ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
21.2.2003 တွင် မြင်ယှဉ်သော်လည်း ရာသီအစပ်ဖြစ်ကာ၊ ဘာဝအလယ်နှင့်လည်း ဝေးကွာလွန်းသည်။
24.12.2003 မှာ စကာ စနေသည် အင်္ဂါကို 270' အမြင် ၅ အင်သာအကွာအဝေးဖြင့် ရာသီတွင်းအံသာ ၁၀ အင်သာ ၁၆ အင်သာ အသီးသီးဖြင့်မြင်လာသည်။ 2004 တွင်အတိအကျမြင်မည့်သဘောရှိသည်။
အင်္ဂါ၏အမြင်များ 90' 180' 210'
25.4.2003 တွင် 90' မြင်သော်လည်း ဘာဝအလယ်များနှင့်ဝေးလွန်းသည်။
21.2.2003 တွင် 180' မြင်ယှဉ်သော်လည်း ရာသီအစပ်ဖြစ်ကာ၊ ဘာဝအလယ်နှင့်လည်း ဝေးကွာလွန်းသည်။
18.3.2003 တွင် ကြာသာပတေးသို့ ၈တန့် အမြင်မြင်သည်။
ဤတွင် အသွားနှေးသော ဂြိုဟ်များ၏ စိုးမိုးမှုပြင်းသော ကာလနှင့် ၄င်းတို့အချင်းချင်း အားကြီးသော ဂြိုဟ်မြင်များကို တွက်ချက်ပြီးဖြစ်သည်။
(၁) ရာဟုနှင့်ကိတ်တို့ ၆ တန့်နှင့် ၁၂ သို့စိုးမိုးချိန်
1.1.2003 မှ 9.4.2003
(၂) ကြာသာပတေး ၈ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
12.2.2003 မှ 25.5.2003
(၃) ကြာသာပတေး ၉ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
5.9.2003 မှ 25.10.2003
(၄) စနေ ၇ တန့်အလယ်သို့ချဉ်းကပ်ချိန်
18.7.2003 မှ နှစ်ဆုံးတိုင်
(၅) အင်္ဂါ ၁၂ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
(၆) အင်္ဂါ ၁ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
(၇) အင်္ဂါ ၂ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
(၈) အင်္ဂါ ၃ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာချိန်
(၉) အင်္ဂါ ၃ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
(၁၀) အင်္ဂါ ၄ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ချိန်
(၁) 26.1.2003 တွင် အင်္ဂါသည် ဗြိစ္ဆာ 11'48" တွင်တည်ကာ ၈ဟုသည် ပြိဿ 11'49" တွင်တည်လေသည်။ ၁၈၀ ဒီဂရီမြင်ကြလေသည်။
(၂) 24.4.2003 တွင် အင်္ဂါသည် မကာရရာသီ 7'19" တွင်တည်ကာ ၈ဟုသည် ပြိဿရာသီ 7'9" တွင်တည်၍ ၈ဟုက အင်္ဂါကို ၂၄၀ ဒီဂရီဖြင့်မြင်လျှက်ရှိသည်။
(၃) 6.2.2003 တွင် ကြာသာပတေးသည် ကရကဋ် 18'44" တည်ကာ အင်္ဂါသည် ဗြိစ္ဆာ 18'53" တွင် တည်ရှိသည်။။ 120' အမြင်ရှိသည်။
(၄) 8.5.2003 တွင် ကြာသာပတေးသည် ကရကဋ် 15'54" တည်ကာ အင်္ဂါသည် မကာရ 15'33" တွင်တည်သည်။ 180' အမြင်ရှိသည်။
(၅) 24.12.2003 မှာ စကာ စနေသည် အင်္ဂါကို 270' အမြင် ၅ အင်သာအကွာအဝေးဖြင့် ရာသီတွင်းအံသာ ၁၀ အင်သာ ၁၆ အင်သာ အသီးသီးဖြင့်မြင်လာသည်။ 2004 တွင်အတိအကျမြင်မည့်သဘောရှိသည်။
(၆) 26.1.2003 တွင် အင်္ဂါသည် ဗြိစ္ဆာ 11'48" တွင်တည်ကာ ၈ဟုသည် ပြိဿ 11'49" တွင်တည်လေသည်။ ၁၈၀ ဒီဂရီမြင်ကြလေသည်။
(၇) 8.5.2003 တွင် အင်္ဂါသည် ကြာသာပတေးသည် ကရကဋ် 15'54" တည်ကာ အင်္ဂါသည် မကာရ 15'33" တွင်တည်သည်။ 180' အမြင်ရှိသည်။
(၈) 18.3.2003 တွင် အင်္ဂါသည် ကြာသာပတေးသို့ ၈တန့် အမြင်မြင်သည်။
1.1.2003 မှ 19.1.2003
ရာဟုသည် ၆ တန့်ကို စီးနင်းနေရာ ၉ ကိတ်သည် ၁၂ တန့်ကိုစီးနင်းနေသည်။ >>စိတ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်မှအပ (အခြားဂြိုဟ်များ ဆက်သွယ်မှု မရှိသဖြင့်) သာမန်မျှသာဖြစ်သည်။
ရာဟုသည် ၆ တန့်ကို စီးနင်းနေရာ ၉ ကိတ်သည် ၁၂ တန့်ကိုစီးနင်းနေသည်။
အင်္ဂါသည် ၁၂ တန့်အလယ်သို့ချဉ်းကပ် လာသည်။
26.1.2003 တွင် အင်္ဂါနှင့် ရာဟုတို့အပြန်အလှန်မြင်ကြသည်။
>>အင်္ဂါ၏သဘာဝဖြစ်သော စိတ်ခံစားမှု လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်မှု ညီကိုမောင်နှမများ ၁၂ တန့်ဗျာယ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လာသည်။ သို့သော် မိမိအိမ်မိမိရပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဇာတာရှင်တွင် ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သတ်သော သောကဗျာပါဒပြေငြိမ်းကာ စိတ်ထားရဲတင်းမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ပြဆိုသော ကာလတို့ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုကာလတွင် ဇာတာရှင်သည် ညီကိုမောင်နှမများဆီမှ အဝေးသို့ရောက်နေကာ၊ ၁၀ တန်းဖြေဆိုမည့် ညီများအပေါ် စိတ်ပူလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ကြမည်ဟု ယုံကြည်လျှက်ရှိနေသည်။
12.2.2003 မှ 7.3.2003
ကြာသာပတေးသည် ၈ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်။
6.2.2003 တွင် ကြာသာပတေးသည် အင်္ဂါကိုမြင်သည်။
>>ကြာသာပတေးသည် ဇာတာရှင်၏ (စိတ်ခန္ဓာကိုယ်) လဂ်နှင့် (မိသားစုတွင်းအေးချမ်းမှု မိခင်သဘာဝ) ၄ တန့်အိမ်ရှင်ဖြစ်ကာ ၈ တန့်ဘာဝအလယ်နှင့် နီးကပ်စွာ ယှဉ်မြင်လာခြင်းမှာမူ အိမ်တွင်းရေးတွင် စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် တစ်စုံတစ်ခုသော အပြောင်းအလဲကို ညွှန်ပြနေဟန်ရှိသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဇာတာရှင် မသိသော်လည်း ထိုကာလတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခါနီးညီတစ်ယောက်သည် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ခိုးပြေးသွားသည်။ မိသားစုတွင်း ခေါင်းမီးတောက်ကာ၊ အမှုအခင်းများ ရင်ဆိုင်ရသည်။
8.3.2003 မှ 23.3.2003
ကြာသာပတေးသည် ၈ တန့်အလယ်နှင့်နီးကပ်လာသည်။ ၁၂ တန့်သခင် ၅ တန့်အိမ်ရှင် အင်္ဂါ လဂ်ပေါ်သို့စီးနင်းလာသည်။ 18.3.2008 တွင် အင်္ဂါသည် ကြာသာပတေးကိုမြင်သည်။
>> အင်္ဂါ၏သဘာဝဖြစ်သော စိတ်ခံစားမှု လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်မှု ညီကိုမောင်နှမများ အရေးပါလာကာ ဇာတာရှင်အား နစ်နာစေလိမ့်မည်။ ( ၁၂ တန့်သခင် အင်္ဂါ လဂ်ပေါ်တက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။) အင်္ဂါသည် ကြာသာပတေးကို မြင်သောကြောင့် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ပညာရေးပြဿနာများ လက်တွေ့ဖြေရှင်းနေရသော သဘောဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုကာလတွင် အထက်ပါ အိမ်တွင်းအပူသတင်းကို ဇာတာရှင် ကြားသိရသောအချိန်ဖြစ်သည်။ စာပေးပွဲတွင်း နီးကပ်လာသော ဇာတာရှင်အတွက် ပူပမ်ခဲ့ရသည်ပင်ဖြစ်၏။
24.3.2003 မှ 8.4.2003
ရာဟုနှင့်ကိတ်တို့ ၆ တန့်နှင့် ၁၂ သို့စိုးမိုးနေသည်။
ကြာသာပတေးသည် ၈ တန့်ဗဟိုသို့ချဉ်းကပ်နေသည်။
>> ကြာသာပတေး ၈ တန့်ရပ်ခြင်း ပြင်းထန်သောကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်နှင့် အိမ်တွင်းအေးချမ်းမှု မိခင် တို့ကို ဖေါ်ပြသော ၁ တန့် ၄ တန့်အိမ်ရှင်သည် မရဏ သေဆုံးခြင်းဘာဝကို နီးစပ်လျှက်ရှိသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုကာလတွင် သားဇောကြောင့် မိခင်ကျမ်းမာရေး ထိခိုက်လာကာ ဆေးရုံတင်ရသည်အထိ ဆိုးရွားခဲ့လေသည်။
9.4.2003 မှ 24.4.2003
24.4.2003 တွင် ၈ ဟုက အင်္ဂါကို မြင်လျှက်ရှိသည်။
>> ၈ ဟုမြင်သော အင်္ဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့် ညီကို မောင်နှမများ၏ ခရီးထွက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းကို ပြဆိုသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုကာလတွင် မိသားစုတွင်းတွင် မိန်းမခိုးပြေးသော ညီကို နှင်ချခဲ့လေသည်။ ညီကိုမောင်နှမများကြား ထိုညီဖြစ်သူကို မုန်းတီးကြလေသည်။
ကြာသာပတေးသည် ၈ တန့်အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်လျှက်၊ အင်္ဂါသည် ၂ တန့်အလယ်သို့ချဉ်းကပ်လျှက်ရှိသည်။ 8.5.2003 နေ့တွင် ကြာသာပတေးနှင့် အင်္ဂါတို့အပြန်အလှန်မြင်လျှက်ရှိသည်။ ဂြိုဟ် နှစ်လုံးလုံး ဥစ်မူလျှက်ရှိသည်။
>> ထိုကာလသည် အဆိုးထဲမှ အကောင်းထွက်မည့်ကာလဖြစ်သည်။ ၈ တန့်ရပ် ဥစ် ဂြိုဟ်ကိုပင် ဥစ် အင်္ဂါ မြင်ခြင်းဖြင့် အကျိုးထူးခံစားရကာ၊ ပညာရေးလက်တွေ့ဖြေရှင်းများ ကြုံရမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုကာလတွင် သင်္ကြန်မတိုင်မီက မစစ်ဖြစ်သော စာမေးပွဲကို ထပ်မံစစ်ဆေးကာ၊ ဇာတာရှင်အနေဖြင့် အောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အထက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် မဆက်စပ်သော ဘ၀တွင် အမှတ်တရဖြစ်ဖွယ် နေ့များသည်လည်း အထက်ပါကာလတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ၄င်းအဖြစ်အပျက်များသည် ၁နွေ ၂လာ ၄ဟူး ၆ကြာ တို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှ သုံးသပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဇွန်လနောက်ပိုင်းကို မူ ပိုစ့်ရှည်လွန်းသဖြင့် မဝေဖန်တော့ပါ။ ထို့အတူ ဇာတာရှင်၏ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာ ထွန်းတောက်မှုကို ဖေါ်ပြမည့် တနင်္ဂနွေ၊ စိတ်အေးချမ်းမှုကို ဖေါ်ပြမည့် တနင်္လာ၊ ဇာတာရှင်၏ အသိဥာဏ်၊ အတွက်အချက်၊ သတင်း တို့ကို ဖေါ်ပြမည့် ဗုဒ္ဓဟူး၊ ဇာတာရှင်၏ ကာမသုခ အချစ်ရေးကို ဖေါ်ပြမည့် သောကြာတို့ကို ဆန်းစစ်ခြင်းများ ချန်လှပ်ခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါ နမူနာ ဟောပြချက်များမှ ကောက်ချက်ပြုနိုင်မည်များမှာ၊
(၁) စရိုက်ဝါသနာဆန်းစစ်ခြင်း ( "ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ" ဟူသော ပို့စ်အရ)
(၂) အကျိုးပေးနိုင်မည့်ယုဂ်များ ( "ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ (၁)" ဟူသော ပို့စ်အရ)
(၃) ဒသာစနစ်အရဆန်းစစ်ခြင်း ( "ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ (၂)" ဟူသော ပို့စ်အရ)
(၄) ကောဇာအရဆန်းစစ်ခြင်း ( "ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ (၃)" ဟူသော ပို့စ်အရ)
အမျိုးမျိုး ဆန်းစစ်ဝေဖန်နိုင်ကြောင်း တင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ နည်းတစ်မျိုးစီကပင် သရုပ်ဖေါ်ကြပါသည်။ သို့သော် ထိုနည်းများအားလုံးသည်ပင် လူတစ်ယောက်လုံးအကြောင်းကို အလုံးစုံမဖေါ်ပြနိုင်သေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ထိုလေးနည်းလုံး ဆက်စပ်နိုင်သမျှ တွေးနိုင်သမျှ အကျိုးရှိမည်ဟုယုံပါသည်။ ၄င်းနည်းတို့အပြင် အခြားနည်းများ ရှိပါသေးကလည်း လေ့လာသင့်သည်ထင်ပါသည်။ နက္ခတ်အဟောများနှင့် ကောဇာအဟောနောက်ဆက်တွဲကို နောင်တွင် ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
နက္ခတ်ပညာသည် နက္ခတ်ပညာလိုက်စားလိုသူများအား လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်ပါစေကြောင်း အသုံးချနိုင်ပါစေ ကြောင်း ဆန္ဒပြုပါသည်။
နက္ခတ်တွေရဲ. တည်နေရာကို ဖေါ်ပြထားတာ. .အင်မတန် ရှင်းလင်းပါတယ်။ နက္ခတ်တွေ အကြောင်းကို စတင်လေ့လာ သူတွေနဲ. အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်တဲ့ ဖေါ်ပြမှတွေပါပဲ။
အိပ်ရေးပျက်တာရယ် အပူချိန် အနှုတ် ၇ ရယ်ပေါင်းပြီး ဖျားနေလို့၊ အဖျားကျတုန်း ပိုစ့်ဖြည့်ဖြည့်တင်နေရပါတယ် ဆရာရေ။
ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ (သို့) Character တ...